Ogaden News Agency (ONA) – Dalada Ururada Bulshada Ogadeniya oo u Baaqay Beesha Caalamka Kulanka Somaliya Looga arrinsanayo London In qadiyada Ogadeniya Fiiro loo Yeesho.
Ururada bulshada Ogadeniya ee Jaaliyaadka Somalida Ogadeniya Sida Ururka Haweenka, Dhalinta, Aqoonyahanka iyo waxgaradka Somalida Ogadeniya ayaa warqad ay ku mideysanyihiin waxay u gudbiyeen Baaq ay usoo jeedinayaan Beesha Caalamka ee ku howlan Shirka looga Arrinsanayo Somaliya Magalada london ee ka furmay 23/02/2012.
Waxaa warqadan loogudbiyay beesha caalamka ay ka xogwaramaysa nidaamkii Gumeysi ee umada Somaliyeed loo qeybiyay. Sidoo kale waxa ay ka xogwarameysa in wadanka Ingiriisku uu isku dayay in Ummada Somaliyeed la isu keeno oo aan lakala jarin aayahoodana ay Umada Somaliyeed ka tashato. iskudaygii Belvin Plan oo noqday mid aan lagu guulaysanin kadib markii wadamo kale oo Ree Galbeed ahi ay gaashaanka ku dhufteen iyaga oo u xaglinaya Gumeysiga Ethiopia.
Waxa warqadan lagu cadeeyay in 20kii sanno ee daggaalka Sokeeye kasocday wadanka Somaliya ay kaalin laxaad leh dagaladaas ku lahaayeen wadamada Dariska ahi Geeska Afrika khaasatan Ethiopia oo dab ka shidaysay kuna dadaalaysay in Dowlad Somaliyeed dhismin. Ethiopia waxa ay ka cabsi qabtaa Somalida Jamuhuriyada Somaliya oo dad la qoysa ah Somalida Ogadeniya ee Gumeysiga ku jira. Haddi Dowlad Ka dhalato Somaliya waxay cabsiweyn ka qabaan in dowladaasi ay taagero siinayso shacabka Ogadeniya sidii dowladihi hore ee Jamuhuriyada Somaliya. Sidaas awgeed hadiyo jeer waxay ku dadaaleysa inay dab ka shido Somaliya oo aan xal iyo dagganaasho laga gaadhin Somaliya.
Iyada oo Xal loo helin qadiyada Ogadeniya waxa adkaanaysa in xal loo helo Jamuhiriyada Somaliya. Sidaas awgeed waxa baaqan u ku adkeynaya Wadamada Ree Galbeedka ee ku howlan shirka London in xal loo raadiyo Qadiyada Ogadeniya.
Gumeysiga Ethiopia waxa uu kawada dhulka Ogadeniya tacadiyo iyo xasuuq iyaga oo kumanaan kun ku dilay, una adeegsanaya Kufsiga nooc daggaalka kamid ah. Sidoo kale waxa taliska Gumeysiga Ethiopia uu kusoo rogay dhulka Ogadeniya cunaqabatayn ganacsiga ah, Gargaarka Bani Aadanimo iyo cunada. Waxayna hor istaageen Saxaafada caalamka inay kaso waranto Ogadeniya iyaga oo ka hor imaanaya xeerarka Caalamiga ah ee UN-ta.
Xalinta dhibaatada Somaliya iyada oo la xalinin midka Ogadeniya waxa uu la micno yahay Ninka Sysiphus ee giraantiisii buurta saari kariwayay. (ama qoladii Juud Wamajuud ee Buurta inay jabiyaan damceen ee markay dhameyaanba arroorta xigta kusoo laabta Buurtii oo Halkay shalay ka bilaabeen taagan).
Ogadeniya waa qoys kamid ah Dhibaatada Somaliya, iyada oo xal loo helin Ogadeniya haddii la isku dayo in Somaliya xal loo raadiyo waxay noqonaysa guuldaro aan laga gaadhin natiijo. Ethiopia xattaa hadda taas waa ay ogaatay waxayna isku dayaysaa in ay xal ka gaadho qadiyada Ogadeniya. Waxa dhowaan ay taliska Ethiopia ka codsadeen Dowlada Kenya inay dhex dhexaad ka noqoto oo ay dhexdhexaadiso Ururka ONLF iyo Taliska Ethiopia si loo gaadho wadahadal lagu raadinayo xalinta qadiyada Ogadeniya.
Sidaas awgeed waxa beesha caalamka aan ka codsaneyna in ay dhexdhexaadiso Ururuka ONLF iyo Ethiopia ama ay isku daydo inay saameyn ku yeeshaan wadahadalkaas ay dowlada Kenya ku dhex jirto. SI labada dhinac ee Gumeysiga Ethiopia iyo Ururuka ONLF uwada fadhiistaan.
qoraalkan kore waxa uu kami yahay qoraalo aan kasoo qaadanay turjumaad warqad ay Ururada Bulshada Somalida Ogadeniya u direen Beesha caalamka ee soo abaabushay shirka London ee dowlada somaliya loogu yeedhay xalkana loogu raadinayo.